Ezona ncwadi zangoku
Iincwadi ezikwizihloko ezikhoyo
I-Haunting Valley, ngu-Anna Wiener
Sonke sasifuna laa gang gangsters kunye nezinye iigeksi ezivela eSilicon Valley. Iqela labantwana bakatata ababhengeze inkqubo entsha yezoqoqosho kwihlabathi lonke ukuze kuxhamle wonke umntu kwaye ajolise kuluntu lwentlalontle. Ukusa kwehlabathi elitsha lobuchwephesha kunye nezibonelelo zalo ezizukileyo ...
I-Stakes, ngu-Philipp Blom
Ukusetyenziswa kwegama elithi "umdlalo" kubonisa ngokucacileyo umbono wehlabathi lethu njengeyona nto ingeyiyo kwaphela. Ngenxa yokuba yonke into ngumdlalo, singabemi bokwexeshana kule ndawo kwaye ngenxa yoko asinakuthatha ngokungathandekiyo phantse nantoni na. Kuphela, ngelishwa, i-etymology ye ...
Intwasahlobo ye-Extremadura, kaJulio Llamazares
Kukho ababhali ekuthi kubo okwenzekayo emhlabeni banesidima esahlukileyo, ubude obwahluke mpela kunamaxesha okubonisana kunye nemibono ephela ifikelela kuthi. UJulio Llamazares uvela kuloo nkundla yababalisi abasebenza ngokuzonwabisa ngokukhawuleza xa besitshiza ...
Ukusuka kwiLazarillo de Tormes asifumananga incwadi engaziwayo enomdla omkhulu kunale. Ngenxa yokuba umba uhlengahlengisiwe kwimeko yehlabathi esinayo sonke nge-tie piiiiii (nokuba ngamaqanda okanye ngamaqanda). Ngobhubhani ohlaselayo kuwo onke amanqanaba, ezine ...
Isoyikiso Esibi, ngu-Michael T. Osterholm
Incwadi yesiprofeto eyaqala ukulumkisa malunga nengxaki ye-coronavirus. Le ncwadi, ibhalwe yenye yeengcali ezikhokelayo kwihlabathi kwizifo ezaziwa ngokuba zii-epidemiology, iqikelela inyathelo ngenyathelo ubhubhane obetha umhlaba. Olu hlelo luhlaziyiweyo lubandakanya intshayelelo apho imeko ...